ကိုချစ်ဖေ ၏ မရေးမနေနိူင်ခြင်းများ: ရှိခဲ့ခြင်းများ
ကဗျာရူးစာရူးတယောက်ပါ ရေးချင်ရာရာတွေ ရေးပြီးဖတ်ချင်ရာရာတွေလည်း ဖတ်ဖြစ်ဖို့ ဘလော့မိသားစုထဲ မယောင်မလည်ရောက်လာတဲ့သူပါ ကျနော့်မေးလ်က kochitphay64@gmail.com အင်ဗိုက်လုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုဝမ်း သာစွာကြိုဆိုပါတယ်။ စီဘုံးမထားလို့ ရေးလို့ရတဲ့နေရာမှာ ရေးလို့ရသလိုသာရေးသွားနိုင်ပါတယ်.လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့
နှစ်သက်ရာ ၀ထ္ထု (1)
ပင်လယ်ကြီးကို အဖေါ်ခေါ်လို့။ ။
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 9:51 PM
ဆောင်းယွန်းလ, February 19, 2010 at 11:09 PM
မိုးစဲမယ့်နေရှိမှတော့ ကောင်းကင်ကြီးလည်း လန်းလာမှာပါ
Nge Naing, February 20, 2010 at 1:10 AM
အခုတလော ကဗျာတွေပဲ တင်ဖြစ်နေတယ်နော့်။ ကျွန်မက ကဗျာဆိုရင် သိပ်နားမလည်လို့ ဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့ တခါတလေ မှတ်ချက်ပေးလို့ မတတ်ဘူး။
ကိုလူထွေး, February 20, 2010 at 1:23 AM
colourblind ဆိုတာ အဲဒါမျိုးကို ပြောတာလားဗျ...
ရွှေရတုမှတ်တမ်း, February 20, 2010 at 8:36 PM
Unknown, February 21, 2010 at 8:35 PM
Anonymous, February 21, 2010 at 9:03 PM
သိင်္ဂါကျော်, February 22, 2010 at 11:49 PM
တိုတိုလေးနဲ့ ထိမိတဲ့ ကဗျာလေးပဲ..
မွနျမာအလုပျသမားတှေ ထိုငျးမှာ တရားဝငျအလုပျလုပျဖို့ ပွနျသှားနိုငျတော့မယျ - ထိုငျးနိုငျငံဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးခှငျ တခုက မွနျမာအပါအဝငျနိုငျငံခွားသားအလုပျသမားမြား။ (သွဂုတျ ၀၆၊ ၂၀၂၀)အိမျနီးခငျြး သုံး နိုငျငံက အလုပျသမားတှေ ထိုငျးနိုငျငံ...
Honeymoon Packages for Couple in Lombok - Every honeymoon couple wants to make their honeymoon trip an experience of their life time. Every honeymoon couple is interested in making their honeymoon...
- What really happens to your plastic when you throw it away? Posted by David Wolfe on Wednesday, 29 April 2015
အင်တာနက် အမြန်နူန်း အတွက်ပါ - အင်တာနက် အမြန်နူန်းအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ Firefox extension addon လေးပါ။သိသိသာသာမြန်လာပါတယ်။ Tweak Network 1.6 by Edwin Martin Tweak Network will speed u...
ကိုယ့်အကြောင်း.............. - နေဝင်ချိန်တွေများနေလို့ နေထွက်ချိန်ကို စောင့်နေသူ …………………….. အမှောင်ထဲမှာ ရောက်နေလို့ အလင်းရောင်ကို မျှော်လင့်သူ ………………. အချစ်စစ်ကိုငတ်နေလို့ မေတ္တာအေးအေးလေးက...
ရွေးချယ်ခြင်း - မတရားမှုတခုမှာ ကြားနေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ဖိနှိပ်သူဖက်ကလိုက်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာနဲ့ အတူတူပါပဲ -မာတင်လူသာကင်း
၂၀၂၀ ရောက် ၀န်ဆောင်မှု - တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးတက်လာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတွေနဲ့ အတူ အချက်အလက် စုဆောင်းထားရှိမှု ကလည်း တိကျခိုင်မာလာပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဟာသလေးတစ်...
Burma Labour Solidarity Organization: Past schooling conditions
ကျနော့်အရောင်က အစိမ်းရောင်ပါ ခင်ဗျားတို့ကကော.